Chili Piper: Yekuzvimiririra Kuronga App yeInbound Lead Shanduko | Martech Zone
Ndiri kuedza kukupa mari yangu - sei uri kuiomesera kudaro?
Uku kunzwa kwakajairika kune vazhinji vatengi veB2B. Zviri 2020 - sei isu tichiri kutambisa nguva yevatengi vedu (uye neyedu) nguva nemaitiro mazhinji ekare?
Misangano inofanira kutora masekondi kuti ibhuye, kwete mazuva.
Zviitiko zvinofanirwa kunge zviri zvekutaurirana zvine musoro, kwete zvekutemwa nemusoro.
Emails anofanirwa kupindurwa mumaminetsi, kwete kurasikirwa mubhokisi rako rekunyora.
Kukurukurirana kwese kuri parwendo rwevatengi kunofanirwa kunge kusingafadzi.
Asi ivo havasi.
Chili Piper iri pachinangwa chekutenga (uye kutengesa) zvakanyanya kusarwadza. Tinotarisa kudzorerazve masisitimu ekuita anoshandiswa nezvikwata zvemari - kugadzirisa zvese zvaunovenga pamusoro pemisangano, zviitiko, uye email - kuti ugone kushandisa nguva yakawanda kutora matanho.
Mhedzisiro yacho kuwedzera kugadzirwa, yakakwira shanduko, uye mamwe akavharwa madhiri.
Isu tine mitsara mitatu yechigadzirwa:
Chili Misangano inopa iyo indasitiri inokurumidza, uye yakazara mhinduro yekugadzirisa otomatiki uye kuendesa misangano padanho rega rehupenyu hwevatengi.
Muenzaniso 1: Kuronga nematanho anotungamira
Problem: Kana tarisiro ichikumbira demo pane yako webhusaiti ivo vatove 60% kuburikidza nekutenga maitiro uye vakagadzirira kuita hurukuro ine ruzivo. Asi avhareji yekupindura nguva maawa makumi mana nemasere. Panguva iyoyo tarisiro yako yaenderera kumberi kumukwikwidzi wako kana kukanganwa nezvedambudziko ravo zvachose. Ndosaka 48% yezvikumbiro zvemisangano inowanda zvisati zvabhadharwa.
Solution: Concierge - inbound kuronga chishandiso chakabatanidzwa muChili Misangano. Concierge iri online scheduler iyo inosangana zviri nyore neako aripo mafomu ewebhu. Kana iyo fomu yaendeswa, Concierge inokodzera iyo inotungamira, inoiendesa kune chaiyo yekutengesa rep, uye inoratidza yakapusa yekuzvishandira-wega scheduler yako tarisiro yekuverenga nguva - zvese mune imwe nyaya yemasekondi.
Chiitiko chechipiri: Kuronga kwako wega kuburikidza neemail
Problem: Kuronga musangano pamusoro peemail inzira inoshungurudza, kutora maemail akawanda ekudzoka-uye-kusimbisa nguva. Kuwedzera vanhu vazhinji kune iyo equation kunoita kuti zvive zvisingaite. Pakupedzisira, zvinotora mazuva kutora nguva. Pakaipa, uyo anokukoka anorega uye musangano haumbozoitika.
Solution: Instant Booker - misangano yemunhu-yakawanda, yakanyoreswa neemail kamwe chete. Instant Booker ndeye online kuronga yekuwedzera (inowanikwa pa G Suite uye Outlook) iyo reps inoshandisa kubhuka misangano nekukurumidza pamusoro peemail. Kana iwe uchida kurongedza musangano, ingobata mashoma eanowanikwa nguva dzemisangano uye uzviise muemail kune mumwe kana vanhu vazhinji. Chero ani anogamuchira anogona kudzvanya imwe yenguva dzakatarwa uye munhu wese anonyorerwa. Imwe-tinya uye ndizvozvo.
Chiitiko chechitatu: Kuronga kutungamira kwemaoffoff kufona
Problem: Kuronga handoff (aka. Kutambidzwa, kufunda, nezvimwewo) misangano chiitiko chekudzokera-uye-mberi. Iyo yakajairwa handoff poindi pakati pe SDR neAE (kana AE kusvika CSM) musangano wakatsvaga. Asi inotungamira yekuparadzira mitemo inoita kuti zviomere kune reps kuverenga mabhuku nekukurumidza uye inoda zvinyorwa zvemanyorero. Izvi zvinokonzeresa kunonoka uye hapana-zvinoratidzira, asi zvakare zvinowedzera njodzi yekusarongeka yekutungamira, nyaya dzekuita, uye hunhu husina kutsarukana.
Solution: Instant Booker - bhuku maoffoff misangano kubva chero kupi mumasekondi. Yedu 'Instant Booker' yekuwedzera inosangana ne Salesforce, Gmail, Outlook, Salesloft, uye nezvimwe, saka reps inogona kubhuka misangano kubva chero kupi mumasekondi. Vatungamiriri vanongoerekana voendeswa kumuridzi chaiye saka reps inogona kubhuka handoff misangano mukarendari chaiyo, nguva dzese, pasina kutsvaga kuburikidza nema spreadsheet.
Kumbira Chili Piper Demo
NeChili Zviitiko, zviri nyore kune veshambadziro vezviitiko kuti vaone zvisina musono pre-chiitiko musangano wekubhuka kwevatengesi reps, chaiyo uye otomatiki kupiwa kwemikana akagadzirwa pane izvo chaizvo zviitiko, uye isina musono onsite manejimendi yekupedzisira-yechipiri kuronga shanduko uye kuwanika kwemukamuri.
Muenzaniso 1: Pre-Kugadzirira Chiitiko Misangano
Problem: Inotungamira kune chiitiko, vazhinji vekutengesa reps vanofanirwa kuronga nemaoko misangano yavo. Izvi zvinoreva kumashure-uye-kunze maemail ane tarisiro yekuyedza kuenzanisa makarenda nemakamuri emusangano. Pamwe chete, izvi zvinogadzira toni yemusoro uye kuvhiringidzika kune rep, mutengi, uye maneja wechiitiko - akakosha mutambi anoda kubata kugona kwemakamuri emusangano uye kuziva kuti misangano iri kuitika, riini. Maitiro ese aya anowanzo kutarisirwa muspredishiti.
Solution: NeChili Zviitiko, repi yega yega ine yakasarudzika yekubhuka link ivo yavanogona kugovana netarisiro pamberi pechiitiko - kugadzira kuronga uye kubatana kwenzvimbo imwe-bhatani maitiro. Misangano yakatemwa inowedzerwawo kuKutarisa-MuKarenda - iyo yakakomberedzwa Karenda iyo mamaneja ezviitiko anoshandisa kuteedzera musangano wese uri kuitika pachiitiko pasi.
Muenzaniso 2: Chiitiko Chemusangano Kuzivisa uye ROI
Problem: Zviitiko Mamaneja (zvakare Chiitiko Vashambadziri) vanonetseka nekutevera zviitiko zvemisangano mu Salesforce uye kuratidza chiitiko ROI. Kuteedzera musangano wese kumusangano chiitiko chemanyorerwo chevatariri vezviitiko. Ivo vanofanirwa kunge vachidzingirira pasi yekutengesa reps, kubata akawanda makarenda, uye nekuteedzera chese chiri mune pepredishiti. Kune zvekare maitiro echinyorwa ekuwedzera musangano wega wega kumushandirapamwe wechiitiko mu Salesforce zvinotora nguva. Asi zvese zvakakosha kuitira kuratidza ROI.
Solution: Chili Zviitiko zvinobatana zvisina musono ne Salesforce, saka musangano wega wega wakatsvaga unoteverwa pasi pechiitiko chemushandirapamwe. Yedu Yekutarisa-muKarenda zvakare inoita kuti zvive nyore kune mamaneja ezviitiko kuteedzera isina-show uye kugadzirisa musangano kupinda muSalesforce. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kwazvo kurondedzera pachiitiko ROI uye voisa tarisiro yavo pakuita chiitiko chakakura.
Chili Inbox (parizvino iri yega beta)
Kune zvikwata zvemari zvinoshandisa email kuti vataure netarisiro uye vatengi, Chili Piper Inbox inopa nzira yakapusa, inoshanda, uye yakasanganiswa yezvikwata zvekushandira pamwe nekubatana zvakanyanya, kuve nekuonekwa mune data revatengi, uye nekupa ruzivo rwevatengi rusina kukakavara.
Muenzaniso 1: Kubatana kwemukati kwakatenderedza maemail
Problem: Yemukati emailing inoshatisa, inovhiringidza, uye yakaoma kubata. Emails anorasika, iwe unofanirwa kusefa kuburikidza nemazana eCCs / Mberi, uye iwe unozopedzisira wakurukura pamusoro pazvo kana mukutaura uko pasina chinhu chiri muchirevo uye hapana chinozonyorwa.
Solution: Inbox Comments - inobatanidza email chimiro mukati meChili Inbox. Kufanana nenzira yaunoshanda nayo muGoogle Docs, yedu Inbox Comments ficha inoita kuti iwe usimbise mameseji uye utange hurukuro nenhengo dzechikwata chako mubhokisi rako rekunyora. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kusunungura nhengo dzechikwata mukupa mhinduro, rubatsiro, kubvumidzwa, kudzidzisa, uye zvimwe.
Muenzaniso 2: Kutsvaga ruzivo rweakaundi
Problem: Kuti unyatso kuziva zvakaitika neaccount usati wagara nhaka zvinotora maawa anonetesa ebasa kutsvaga mabasa eSalesforce, kuongorora zviitwa muTare Engagement chishandiso, kana kusefa kuburikidza neCCs / Mberi mubhokisi rako rekushandisa.
Solution: Account Intelligence - email huchenjeri hunhu mukati meChili Inbox. NeChili Inbox, iwe unokwanisa kuwana timu-yakafara email nhoroondo pane chero account. Yedu Akawunti Intelligence ficha inoita kuti iwe ukwanise kuwana yega yega email kuchinjisa neimwe account, zvese kubva mukati mebhokisi rako Izvi zvinoita kuti zvive nyore kutaura neemaimeri ese nemamiriro aunoda.
Yakagadzwa muna2016, Chili Piper iri pachinangwa chekuita misangano uye email zvakanyanya uye nekubatana kwemabhizinesi.
Chili Piper inotarisa mukugadzirisa iwo echinyakare maitiro ekuronga uye eemail ayo anokonzeresa kusagadzikana kukosheswa uye kudonhedza mukutengesa - zvichikonzera kuwedzera kwekuwedzera uye kutendeuka kwehuwandu mukati meiyo faneli.
Kusiyana neyakajairwa nzira yeinbound lead manejimendi, Chili Piper anoshandisa akangwara mitemo kukodzera uye kugovera zvinotungamira kune kurudyi reps mune chaiyo-nguva. Software yavo zvakare inobvumidza makambani kushandisa otomatiki handoff kubva kuDRR kuenda kuAE uye mabhuku emisangano kubva kumakambani ekushambadzira uye zviitiko zvehupenyu. Nemawebhusaiti avo akateedzerwa paemail, Chili Piper achangobva kuzivisa Chili Inbox, inobatanidza inbox yezvikwata zvemari.
Makambani senge Square, Twilio, QuickBooks Intuit, Spotify, uye Forrester vanoshandisa Chili Piper kugadzira chiitiko chinoshamisa chevatungamiriri vavo, uye mukudzoka, vanoshandura zvakapetwa huwandu hwevatungamiriri mumisangano inoitwa.
Tags: misangano yebhukuchili zviitikochili inboxchili misanganochili piperemail kushandisa michinaG Suitegsuiteinbound lead kuronga kurongakuronga kwakawandatungamira kutambidzamusangano wekufambisa